Usoro Ntuziaka Post nke na-abawanye okporo ụzọ
Nzuzo ohuru ohuru ohuru esi bulie nduzi 10
Utu aha bu otu n’ime ihe elele anya n’ime blọgụ ma ọ bụ websaịtị gị. Klaasị ọ bụla ị dere mgbe ọ bụla gwara gị na nnukwu aha na-achịkọta akụkọ ahụ. Na weebụ, ọ bụghị otu nkwekọrịta ahụ. Enwere m ike ide aha a dị ka "Ide ederede Ozi"… ọ dịghị onye ga-pịa ya.
Otu ihe ị ga - ahụkarị na ndị ọkachamara na - ede akwụkwọ na ntanetị bụ na ha na - eji otu usoro ahụ oge niile iji dọta okporo ụzọ. My post title is a bit mocking… but the fact is na usoro ndị a na-arụ ọrụ. Ndị a bụ ụdị edemede iri ga - agba ndị ga - agba ume ịpịpịa n’ozi gị.
How to… More, Mma, Ọsọ ọsọ - tinye n'ọrụ a Otu esi achikota ya na oke ihe.
Ndepụta 5, 10, 100 - Ọ bụghị ọtụtụ ... ọ gwụla ma ị na-achọ ime nnukwu ihe. Ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị na ndepụta.
Ajuju? Azịza - Jụọ ajụjụ onye ọ bụla jụrụ wee gosi na azịza ya.
Zingtụnanya, Dị Oké Mkpa, Nke Kachasị Elu, Ihe E Si n'Aka - Jiri okwu na-akpali mmetụta uche siri ike na ọ bụ ozi kachasị mma mmadụ ọ bụla nwere ike inweta ebe ọ bụla.
Free - Yup, ndị mmadụ ka hụrụ n'anya n'efu.
Ihe Kachasị mma, Ndị ama ama, bara ọgaranya maara - chọrọ ịma ihe ha maara, ọ bụghị gị?
Nzuzo Nzuzo, Usoro - Ọ bụrụ na ọ bụ ihe nzuzo, ọchịchọ ịmata anyị ga - akacha mma n’ime anyị.
Ngwa, Ngwa, Oge - Anyị enweghị oge buru ibu ụbọchị ndị a, jiri okwu setịpụrụ atụmanya na enwere ike ijide ozi ahụ ngwa ngwa.
Nnukwu Onu ogugu, Onu ogugu - Ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị na ọnụ ọgụgụ buru ibu.
Nwee mmeri, merie, merie - Ndị mmadụ asị ida. Gosi ha etu ha ga-esi gbochie ya!
Na peeji nsonaazụ ọchụchọ (SERP), a zutere gị aha na nkọwa - ọ bụ ya! Ndị ahụ bụ naanị akụkụ abụọ nke onye na-agụ ya hụrụ tupu ị kpebie ma ịpị ma gaa na saịtị gị. Aha e si gị aha peeji mmewere. Ọ bụrụ na ị na-ede post post, nke ahụ dabara na aha post blog gị. Enwere ike ịkọwa nkọwa gị site na ọdịnaya ọdịnaya, mana ọ bụrụ na ị nwere meta nkọwa mkpado, engines ọchụchọ ga-ewekarị ọdịnaya ahụ kama.
Youpịrị na ya? Ama m na ị chọrọ!
Ọ bụrụ na ị na-ele anya na weebụ na isiokwu ndị na-adọrọ mmasị karị, utu aha ndị a na-adọrọ adọrọ na-adị n'elu ha mgbe niile. Emechara m nyocha maka onye ahịa na aha peeji ha na ndị asọmpi ha - anyị chọpụtara na ha na-arụ ọrụ nke ọma ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ha mana pịa ha site na ọnụego (CTR) dị ala.
Irè ojiji nke isiokwu ma na-akpali akpali post utu aha nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na okporo ụzọ gị. Wepụta oge dị ukwuu iji dee aha post gị dịka ọdịnaya n'onwe ya!
Ngwakọta Na-emeri nke Ngwaahịa, Nhọrọ, na Mmetụta
Kedu mgbe SEO ruru $ 100 Million?
Jul 19, 2010 na 7: 03 AM
"Amazing Free Formula Reveals Top 10 Nzuzo Ndị a ma ama na-eme iji mee ka ọnụ ọgụgụ buru ibu ma merie ngwa ngwa"
Kedu ka m ga-esi mee?
Jul 20, 2010 na 9: 42 AM
MA CHE, E B M ỌZỌ! Mee iwu ugbu a wee nweta nke abụọ nke Corporate Blogging for Dummies FREE - naanị kwụọ ụgwọ mbupu na nhazi na njikwa nke naanị $ 16.49!
Na mbido mbụ ị na-aga bụ Twitter Marketing maka Dummies na 20% gbadoro tiketi gị na Blog Indiana!